FANKALAZANA NY 08 MARSA: Mirotsaka an-tsehatra manatona ireo vehivavy ny Vadin’ny Filoha – Free News
mercredi, 8 décembre 2021 - 12:38
Niara-dalana tamin'ny Vadin'ny Filoha tao Fianarantsoa ny Minisitry ny Fanabeazam-pirenena.
Accueil/Samihafa/FANKALAZANA NY 08 MARSA: Mirotsaka an-tsehatra manatona ireo vehivavy ny Vadin’ny Filoha
FANKALAZANA NY 08 MARSA: Mirotsaka an-tsehatra manatona ireo vehivavy ny Vadin’ny Filoha
Niavaka tsy toy ny isan-taona. Ramatoa Mialy Rajoelina, Vadin’ny Filoham-pirenena, sady Filoha mpanorina ny Fikambanana Fitia, indray no tonga eny ifotony manatona ireo Vehivavy, ao anatin’ny fanamarihana ny Andron’ny Vehivavy, ny 08 Marsa izao. Toerana maro no efa notsidihiny, nanomboka teto Antananarivo, Toamasina, Fianarantsoa, Toliara, sy ny sisa… Ary mbola hitohy izany mandrapahatongan’ny alatsinainy izao.
Lucien R. 3 mars 2021
Tsy maintsy nandray fepetra nifaranaka amin’ny toe-java-misy ankehitriny ny Fitondram-panjakana amin’ny endrika hanamarihana ny andron’ny vehivavy, ny 08 Marsa ho avy izao. Tsy hisy, noho izany, ny fanamarihana hamoriana vahoaka maro amin’ny toerana tokana, fa ny fanamarihana isam-paritra no atao, ary izany dia efa nanomboka hatramin’ny fiandohan’ity herinandro ity. Ho an’ny omaly, tao Toliara II ny Vadin’ny Filoha, Kaominina Belalanda. Nisy ny fambolena Ananambo (Moringa) 3000 fototra tao amin’ity Kaominina Belalanda ity, niaraka tamin’ny fikambanam-behivavy Magnavotse. Avy eo misy ny « don materiel de transformation de Moringa en poudre mutualisé » nataon’ny Vadin’ny Filoha. Nanatrika ny fotoana tao Toliara ny Minisitry ny Rano, Fanadiovana sy Fidiovana, Rakotovelomanantsoa Voahary.
Nisy koa ny fandalovana tao amin’ny Faritra Matsiatra Ambony ho an’ny omaly, izay nitsidihana ny koperativa Soatantely, ao amin’ny Kaominina sahambavy, Distrikan’i Lalangiana. « Matsiatra Ambony, manan-karena ampela mahavita azy. Ilaina ny tany mahavokatra sy ny vehivavy mavitrika”, hoy ny Vadin’ny Filoha tao an-toerana. Notsindriany fa sehatra mitondra zava-tsoa maro ny tantely ary ilaina fanatsarana hatrany mba ho antoka hahafahana mampandroso. Araka izany, homena fiofanana ireo mpamokatra tantely mba hampiroborobo ny seha-piharian’izy ireo, hoy Ramatoa Mialy Rajoelina. Nisy koa ny fambolena dite tao sahambavy koa. “Zava-dehibe ho ahy ny mahafatatra ny dingana rehetra eny an-tanimboly”, hoy izy nandritra ny lahateniny. Marihana fa nisy fanolorana fitaovana “ruche” ho an’ny koperativa soatantely tao an-toerana, ary nandeha tamin’ny lamasinina FCE vaovao ny delegasiona niainga tao Fianarantsoa nihazo an’I Sahambavy. Nanotrona ny fotoana tao Fianarantsoa, ny Minisitry ny Fanambeazam-pirenena, Sahondrarimalala Marie Michèle.
Tsiahivina fa efa nandalo tao Toamasina ny Filohan’ny Fikambanana Fitia ny Alatsinainy teo. Fotoana izay nanambarany fa manana herim-po sy herin-tsaina azo deraina tokoa ireo vehivavy miisa 200 avy amin’ny kaoperativan-tantsaha “Viavy miketrika” ireo. Avy amina fikambanam-behivavy 10 izy ireo izay miompana amin’ny fanodinana vokatra ho sakafo. “Androany izahay dia niaraka nanetsa ny anana sy namboly zana-kazo fihinam-boa. Ny voankazo avy eto ihany mantsy no ho ahodina ho vokatra azo amidy ary nokendrena indrindra mba hisy tombon-tsanda”, hoy izy nanazava.
FIAROVAM-PIRENENA: Manakaiky vahoaka ny Tafika ho amin’ny Fandriampahalemana
FITANTANANA NY BAOLINA: Potehin-dRabekoto Raoul ny kitra malagasy
FIFANINTSANAN’NY CAN 2022 : Mila miady mafy ny Barea amin’ny lalao miverina
VONDRONA FREE: Tsy diso anjara tamin’ny fampahafantarana ny Lf 2020-006
TATITRY NY KAOMISION’NY HCJ : Nahemotra amin’ny lahadinika manaraka